PressReader - Kwayedza: 2019-01-04 - Basa radzika: Vavezi
Basa radzika: Vavezi
NYANZVI dzekuveza matombo panzvimbo yeTsindi Art Gallery, mumugwagwa weAirport Road, muHarare, dzinoti basa ravo rakadzikira zvikuru kuburikidza nekushaya vanovatenga zvivezwa zvavo.
Sachigaro wechikwata chevavezi ava, VaWellington Chingondi (40), vanoti vari kushaya vanotenga matombo avo izvo zvakonzera kuti vatsvage mamwe mabasa ekuita.
“Basa redu iri raizivikanwa richibhadhara zvikuru kare, asi zvasiyana nemazuva ano. Senguva yekupera kwegore nekutanga kwaro saizvozvi, taisitengerwa zvikuru izvo zvakazongosanduka,” vanodaro.
Vanoti basa ravo rinofambirana nekuuya kwevashanyi munyika.
“Chikumbiro chedu kuHurumende nebazi rinotimirira kuti ritibatsire uye veZimbabwe Tourism Authorty (ZTA) kuti vapote vachiunzawo vashanyi kunzvimbo dzinovezerwa,” vanodaro.
Vanoti vamwe vavo vave kupota vachinotsvaga mamwe mabasa ekuita apo vanozodzoka kuzoveza kuitira kuti mhuri dzavo dzirarame.
VaRobert Chikumbo (38) mumwe wevavezi panzvimbo iyi vanotsinhira vachiti kutengwa kwezvivezwa zvavo kwadzikira zvikuru kana vachienzanisa nemakore adarika. “Tine vavezi vematombo vakabudirira kuburikidza nekutengwa kwepamusoro kwaiitwa zvivezwa zvavo, zvino hapana chichiri kufamba saka tinokumbirawo kubatsirwa,” vanodaro.
Vanoti kusiyana nemakore ose, pazororo reKirisimasi rino havana kumbobvira vakatengerwa.
“Mumakore adarika aya kubva mumwedzi waGumiguru kunos
svika munaNdira taiziva kuti inguva yemari. Tinoda kusanganiwa nevanhu vari kunze kwenyika vanoita kuti matombo edu tikwanise kuatengesa ikoko,” vanodaro. VaPhillip Mulima (40) vanoveawo matombo vanoti zvave kuvaemera kuramba vachinotenga matombo ekuvezesa apo zvivezwa zvavo zvisingatengwi. “Tinoenda kuMvurwi, kuChiweshe, Guruve nekumwe uko tinootenga matombo ekuvezesa aya nemari inodhura. Zvakadaro, tinoohaya marori ekutakurisa nemari zhinji.
“Tazopedza kuveza tinokwanisa kugara makore chaiwo zvinhu zvedu zvisina kutengwa,” vanodaro. Vanoti vemarori kutakura matani matatu ematombo vanochaja mari ri pakati pe$300 kusvika $400 kuchitiwo vanokwidza vanodawo yavo. Pakutenga vanoti tani imwe chete inobvira pa$100 zvichisvikawo ku$200.
Vavezi ava vanoti vanokoka kunyange vemakambani nezvikoro nevanhu vakazvimirira kupota vachivashanyira.
“Kune vechidiki vane chishuwo chekudzidza kuveza tinoti ngavauye tivabatsire nekuti isu kukura uko taita, dzimwe nguva rimwe gore vanowana pekurarama vari,” vanodaro VaChingondi.
Wellington Chingondi (kubva kuruboshwe) aina Robert Chikumbu naPhillip Mulima vachicherechedza zvivezwa zvavo
Chimwe chezvivezwa —Mifananidzo naNicholas Bakili